Android र IOS मोबाईलहरूमा QGIS प्रयोग गर्न विकल्पहरू - Geofumadas
जनवरी, 2016 Featured, जियोस्पाटियल - जीआईएस, qgis
QGIS ले आफूलाई सब भन्दा द्रुत बृद्धि भएको खुला स्रोत उपकरण र जियोस्पाटियल प्रयोगको लागि स्थिरता रणनीतिको रूपमा राखेको छ। हामीलाई थाहा छ कि मोबाइल उपकरणहरूको लागि QGIS को संस्करणहरू पहिले नै छन्।
मोबाइल अनुप्रयोगहरूको घातीय प्रयोगले डेस्कटप उपकरणहरू फोन वा ट्याब्लेटमा प्रयोगको लागि संस्करणहरू विकास गर्न छनौट गर्दछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीको लागि सफ्टवेयरको मामला यति स्पष्ट छ किनकि भू-सम्मेलन र फिल्ड र डेस्कटप भू-ईन्जिनियरि forका लागि उच्च अन्तरनिर्भरताका साथ क्षेत्र प्रयोगमा यसको संलग्नता रहेको छ। अहिले सम्म, स्वामित्व सफ्टवेयर प्रमोट गर्ने कम्पनीहरूसँग एक लामो समयको लागि उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोगहरू छन् AutoCAD WS, BentleyMap मोबाइल फोनको लागि, ESRI ArcPad, SuperGeo मोबाइल, केहि उदाहरण दिन।
QGIS को मामला मा, कम्तिमा दुई अनुप्रयोगहरू समाधानको रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ, OpenGIS.ch को हातमा:
१. आईओएसका लागि QGIS।
यसको बारेमा सपना पनि हेरिरहेको छैन। जे होस् QGIS यसको डेस्कटप संस्करणमा बहु प्लेटफार्म हो, आईफोन वा आईप्याडका लागि QGIS को संस्करण हुनु पक्कै सम्भव छैन; हुनसक्छ कहिले सम्म एप्पल आफ्नो व्यापार नीतिहरु परिवर्तन गर्दैन।
समस्या यो छ कि QGIS प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रको प्रकार GPL हो, जुन यसको अधिकतममा कोडको खुलापन ज्ञात हुन्छ र अन्त्य प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सुधार गरिएको छ। एप्पस्टोरको खेल नियमहरूले भन्छ कि यो निजी तेस्रो पक्षहरूको हितमा हानि पुर्‍याउने ग्यारेन्टी नभएको स्वामित्व कोड नभएको अनुप्रयोगहरू विकास गर्न सम्भव छैन। त्यसोभए एक मात्र तरिका एपस्टोरको बाहिर विकासको लागि, इच्छुक प्रयोगकर्ताहरू उपकरणलाई जेलब्रेक गर्ने माने, जुन बुद्धिमानी होइन, न त यो आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको प्राथमिकता हो।
प्रयोगकर्ता र कम्पनीहरु को संख्या विचार लाजमर्दो, एप्पल सफ्टवेयर रुचि, तर पनि हामी देख निःशुल्क सफ्टवेयर नजिक स्पेस गर्न स्वामित्व सफ्टवेयर, भविष्यमा देख्ने समस्या को एउटा उदाहरण हो।
2 Android को लागी QGIS
यो एक अनुप्रयोग हो जुन व्यावहारिक रूपमा QGIS को डेस्कटप संस्करण २.2.8 वियनमा इमुलेट गर्दछ। यो अनुप्रयोगको वजन २२ MB को हो, यो हो Google Play बाट डाउनलोड गर्नुहोस्.
एक पटक स्थापना प्रक्रिया शुरू भएपछि, यसले मन्त्री २ लाई स्थापना गर्न अनुरोध गर्दछ जुन QGIS अनुप्रयोग र QT लाइब्रेरीहरूको बिच पुलको रूपमा कार्य गर्दछ। Ministro II को स्थापना पछि, Qt5Core, qtnystlm, qtsensor, qtGui, libqoffscreen, libminimal, qlibqeglfs, र अन्य नियन्त्रणहरू जस्ता QT5 लाइब्रेरीहरूको डाउनलोड कार्यान्वयन गर्नुहोस् जुन भू-स्थिति, कम्पास, किबोर्ड, डिजिटल नियन्त्रणको सम्भावना प्रयोग गरिएको छ। र अन्य एन्ड्रोइड प्रकार्यहरू।
समग्र आवेदन प्रतीक र पक्ष प्यानल संग QGIS डेस्कटप को लगभग प्रतिलिपि प्रसङ्ग मेनु मोबाइल रूपमा स्थित छ माथिल्लो दायाँ कुना नियन्त्रण माउस र पाठ्यक्रम प्रतिमा विशेषताहरु अलग छ (पुस्तक , चयन, जुम) ट्याक्टायल छ।
संक्षिप्तमा, फोन संग यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी आशा नगर्नुहोस्। जे भए पनि स्क्रिन कति ठूलो छ, यो कार्यशील छैन किनकि डेटा चयनका लागि स्क्रोल बारहरू नियन्त्रण गर्न सकिदैन; र अनुप्रयोगले स्पष्ट रूपमा घुमाउन अनुमति दिदैन। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मैले प्रोजेक्ट ल्याउनको लागि व्यवस्थापन गरेको छु, WFS डाटा कल गर्दै सोनी Xperia T3 मोबाइल फोनको साथ प्रयोग गरेर; जबकि डाटा हेर्न सकिन्छ, साइड प्यानल नियन्त्रण असम्भव छ।
यसलाई नियमित आकारको ट्याब्लेटको साथ प्रयोग गर्नु व्यावहारिक हो किनकि यो डेस्कटप अनुप्रयोग जस्तै छ। डाटा को माइक्रोएसडी कार्ड वा आन्तरिक मेमोरीमा राखिएको छ जहाँ बुझ्न को लागी तपाइँलाई केही संघर्ष गर्नुपर्नेछ।
Android को लागि QGIS डाउनलोड गर्नुहोस्
Q. QGIS का लागि QField
यो अनुप्रयोग पनि त्यही कम्पनीद्वारा विकसित गरिएको छ, लगभग 36 एमबी वजन हुन्छ।
पहिलो पटक यो QGIS परियोजनाको अस्तित्वलाई अनुरोध गर्दछ, जुन ट्याब्लेटमा फाईल राख्न पछि कम्तीमा जटिल हुन्छ, यसले स्थानीय डेटाको मार्गहरू सापेक्ष हुन्छन्।
QField सँग टच र मोबाइल उपकरणहरूको लागि नेटिभ यूजर इन्टरफेस छ। सिnch्क्रोनाइजेसन उपकरणले मोबाइल उपकरण र अवस्थित आधारभूत संरचना बीच डाटाको आदान प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यो QGIS सुइटको पूरकको रूपमा धेरै राम्रो देखिन्छ, विगतको भन्दा फरक जुन डेस्कटप संस्करणको एक अनुकरण मात्र हो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो अनुप्रयोगको प्रयोग, नेटिभ हुनुको कारणले पनि, तपाईले सानो स्क्रिन फोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो यसको परीक्षणको लागि बाँकी छ, किनकि सापेक्षिक पथहरू सहित फाइल प्रविष्ट गर्नु भनेको मैले आशा गरेन।
QField को लागि QGIS डाउनलोड गर्नुहोस्
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो QGIS 3.0 - कसरी, कहिले र के; यो संकेत गर्दछ
अर्को पोस्ट शहरी डिजाइन र योजना मा मास्टर [UJCV]अर्को »
Rep जवाफ "Android र iOS मोबाइलमा QGIS प्रयोग गर्नका लागि विकल्पहरू"
इनपुट अनुप्रयोग जुन QGIS मा आधारित छ iOS मा उपलब्ध छ (यस समयमा टेस्टफ्लाइट):
राम्रो साँझ सबैसँग, म कुनै प्रकार बिन्दु एक तत्व एउटा फोटो कसरी संलग्न थाह भने, मेरो परियोजना मा म क्षेत्र सिर्जना गरेका सोध्न र qfield को आधिकारिक वेबसाइट भन्छ कि बाह्य स्रोत राख्न, तर एक पटक मा चाहन्थे अनुप्रयोग तस्वीर लिन, यो नाक सुरक्षित गरियो। जो कोहीले किन थाहा? म सापेक्ष बाटाहरू म अझै पनि केही संग सिद्ध गरेका छन्। :(
सबैको लागि र अब बधाई तपाईं कुनै पनि जवाफ धन्यवाद
हो, मैले पहिले नै महसुस गरें। यो हुन्छ कि मैले प्रयोग गर्न चाहेको परियोजनामा ​​निश्चित मार्गहरू थिए।
पूर्वनिर्धारित रूपमा QGIS परियोजनाहरूमा मार्गहरू सापेक्ष छन्। केहि पनि Comlejo। केवल फोल्डरलाई तपाईंको ट्याबलेट वा फोनमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्।